अवको आइजीपी को होला ?
असार २४ गते आइजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली अवकाश हुनेछन् । अवको आइजीपी को बन्ला ? राजनीतिक र सुरक्षा निकायमा चर्चा बढेको छ । बरिष्ठ एआइजी तारिणीप्रसाद लम्साल पनि सेवानिवृत्त हुने भएकाले लाइनमा दुई प्रतिस्पर्धी पात्र मात्र छन्– शैलेश थापा र हरिबहादुर पाल । यी दुईमध्ये एक आइजीपी बन्नेछन् ।
प्रश्न छ– को बन्ला आइजीपी । कारण दुबै २०४९ साल वैशाख १९ का ब्याजका हुन् र डीएसपीदेखि एआइजीसम्मको बढुवामा सँगसँगै आएका छन् । एकजना एआइजीमै रोकिनेछन् भने एकजना आइजीपी बन्नेछन् । यी दुबैको ेअवकाश म्याद भने २०७९ वैशाख १९ गते हुनेछ ।
यी दुबैजनाको प्रशंसनीय समझदारी बनेको छ । आइजीपी बन्नकै लागि एकले अर्कोलाई बदनाम नगर्ने, गलत प्रचारमा नलाग्ने । जोसुकै आइजीपी बने पनि भोलिका दिनमा एकदोस्राका लागि सहयोगी बनेर काम गर्ने । नेपाल प्रहरीमा प्रतिस्पर्धीवीच पहिलोपल्ट यस प्रकारको समझदारी देखिएको हो । अहिलेसम्म खुट्टातान्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्तिलाई यी दुई व्यक्तिले हराइदिएका छन् ।
नवराज सिलवाल र रमेश खरेलले आइजीपी बन्न नपाएपछि जागीर छाडेका थिए भने रमेश खरेल त नेकपातिर लागेर सांसद नै बन्न पुगेका छन् ।
तर प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दल र नेतावीच चलेको छ । कुन व्यक्तिलाई आइजीपी बनाउँदा आफूलाई लाभ हुन्छ भन्ने हिसावकिताव चलिरहेको छ ।